Namuhla, bonke amathokheni asetshenziswa njalo. Kodwa naphezu kwalokhu, abantu abaningi abaqondi ukuthi hlobo luni kudivayisi. Ingxoxo elandelayo igcizelela sendlela yokusebenzisa ukuthi uphawu, ukuthi ukusetshenziswa okunjalo kunikeza. It ubhekwa-USB namadivayisi axhunyiwe ku-PC.
Ukugcina ulwazi ku amathokheni
Ngithanda ukuchaza ngokushesha ukuthi le divayisi akuyona drive flash. Ngokungangabazeki, kungase agcinwe endaweni encane lemali kolwazi, kodwa elinganiselwe, isibonelo 64 amakhilobhayithi. Kukhona futhi amathokheni aqukethe gigabytes ambalwa inkumbulo. Kodwa idatha kwimemori zigcinwa ubuchwepheshe esifana esiku imemori khadi. Ngenxa yalesi sizathu, umsebenzi isitoreji kungase kubhekwe njengokwelapha lesibili noma ezincane. Kungani sidinga amathokheni? Wokuthi leli thuluzi enza?
injongo Original - isitoreji nonremovable lwamanye ulwazi olusemqoka. Ngokushesha lubonakale ukuthi kukhona okuncane ukwenzani imemori khadi. isitoreji Nonremovable - ingenye lapho ikhodi ithokheni ngeke uthole kuphi aphume idivayisi. It ayikwazi ukususwa, isibonelo, RAM sekhompyutha. Ukuhluka, uma lokhu kwenzeka, kodwa kubethelwe. Kukhona inketho ukuthekelisa ukhiye nakusolwa, kodwa ngisho ukuthi kuphephile kakhulu ukwedlula uyibeka phezu drive flash. Kungani-ke ephephile ukuze ugcine ukhiye? Token eqala ulwazi PIN-ikhodi okuthekelisa, futhi USB flash drive - akukho.
Ngaphandle kwalokho, noma ngabe ugcine ukhiye kudivayisi lesitoreji esikhiphekayo, bese ngemfihlo ke, umhlaseli kungathatha imizamo eminingi ukuze ususe okufakwe kwindawo. Ithokheni ukugunyazwa ngemva kwemizamo ezintathu akuphumelelanga ukufaka ikhodi ivinjelwe.
Lokhu kuchaza ukuthi, ngisho ne elula izilungiselelo zokuphepha kungcono ukugcina okhiye uphawu.
Ukugcina ukhiye - okubaluleke kakhulu, iziphi amathokheni. Uyini can idivayisi ngaphezu? Nazi ezinye izici:
ukubethela Independent nencazelo.
Qalisa ukhiye ukubethela.
Owenza futhi ngibheka yogesi.
Ithokheni uhlobo black box ngesikhathi lapho imisebenzi cryptographic abazenzi. Ngakho, idatha okufakwayo, waguquka ithunyelwa okukhipha ngokusebenzisa ikhi. Ungakwazi qhathanisa uphawu ne microcomputer: input bese okukhipha ulwazi Kwenziwa nge-USB, has processor ayo, inkumbulo op futhi yesikhathi eside.
Sekuyisikhathi eside iningi egcwele indinganiso ukuthi lisetshenziswa kuyo yonke amaphasiwedi. Lena vele zakudala yesimanje. Umuntu ufuna ukuya yokuxhumana, noma ukuthenga okuthile - isebenzisa iphasiwedi. inzuzo yabo eyinhloko - lula ukusetshenziswa. Kodwa ngesikhathi esifanayo, kukhona izici ukuthi abhece imisebenzi ukuthi ibalulekile kusukela isikhundla nokuphepha ku-mbuzo. Kungaba oyisikhohlwa uthumele iphasiwedi phezu isiteshi singumuntu ongazethembi, isethwe ikhiphedi, nokubikezela.
Amathokheni ziyakwazi ngempela ukuxazulula ngokuphelele zonke izinkinga okuyiwona namuhla isetshenziswa amaphasiwedi. Futhi ukuzixazulula ngokuphepha kalula nangokunembile.
Idatha ngokuvamile ngekhodi ukhiye wokubhala, okuyinto yena, amaphasiwedi ebethelwe. Futhi ukuphepha isikimu enjalo kuncike ngokuphelele kuphela iphasiwedi, engesiyo kuzo zonke izimo sinzima, kungenziwa ethile ikhibhodi noma ukhohliwe. Uma usebenzisa amathokheni unezinketho ezimbili:
Isihluthulelo siwukuba ku uphawu futhi akabashiyi. Le ndlela kufanelekile kuphela nengcosana idatha, ngoba ukuqaqwa usebenzisa izinga ithokheni akuyona okusezingeni eliphezulu. Lowo okonile Ngeke ukwazi ukususa ukhiye.
Ukhiye itholakala uphawu, kodwa inqubo yokubhala ngemfihlo singena inkumbulo sekhompyutha. Le ndlela isetshenziswa, isibonelo, ngemfihlo futhi ukususa ukubhala ivolumu ngokuphelele. Isihluthulelo siwukuba ukususa kungenzeka, kodwa hhayi kakhulu kalula. Iphasiwedi ukweba okuningi lula.
Asikwazi ukusho ngokuqiniseka ukuthi uyogwema ezihlukahlukene izimo ezimbi e ukusetshenziswa nokusatshalaliswa izixazululo esekelwe amathokheni okuqinisekisa. amaphasiwedi Ukweba kuzosuswa, futhi uyowandisa ezingeni sokuphepha ngomqondo global. Kuyinto ukuphepha kanye nokusetshenziswa amathokheni okuqinisekisa. Lokho ukusetshenziswa okunjalo? Izinzuzo kuphela nokwethembeka. Ngisho noma ukulahla ngokuphelele esivuna iphasiwedi uphawu, izinzuzo ezisobala. Phela, ukulahlekelwa kungekho ukhiye ngeke bakwazi ukusizakala.
Indlela ukukhetha router-Wi-Fi ekhaya
GeForce 8600 GT: izici kanye nencazelo